हंगेरी, बुडापेस्ट बाट दिन यात्रा | यात्रा समाचार
क्यापिटलहरू पर्यटकहरूका लागि जहिले पनि चुम्बक हुन्छन्, तर यदि तपाइँ देशको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ भने, थोरै मात्र जानुहोस् र थप जानु उत्तम छ। आज म प्रस्ताव गर्छु बुडापेस्ट भन्दा परको यात्रा, हंगेरीको राजधानी।
गेटवे निस्सन्देह राजधानी हुनेछ, तर यी शानदारसँग बुडापेस्ट बाट दिन यात्रा तपाईं यस सुन्दर देशलाई अझ राम्ररी चिन्नुहुनेछ। के तपाईं मसँग आउनुहुनेछ?
1 हंगेरी र बुडापेस्ट
2 बुडापेस्टबाट दिन यात्रा
हंगेरी र बुडापेस्ट
हंगेरी हो युरोपको बीचमा र यसको युक्रेन, स्लोभाकिया, रोमानिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोभेनिया र अष्ट्रियासँग सीमा छ। यसैले, तपाईं अन्य धेरै देशहरूबाट प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ वा सिधा विमान द्वारा बुडापेस्टमा उत्रन।
राजधानी देशको वित्तीय केन्द्र हो र सम्पूर्ण पुरानो डान्यूब क्षेत्र एक विश्व सम्पदा स्थल हो स्मारकहरू, पुराना गिर्जाघरहरू, सभाघरहरू, मध्ययुगीन महल र शानदार थर्मल बाथहरू सहित। यदि तपाईं विमानबाट आइपुग्नु भयो भने Ferenc Linszt अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट तिमीलाई स्वागत छ। यो केन्द्रबाट १ kilometers किलोमिटर टाढा छ र यात्रा बस, ट्याक्सी वा ट्रेन द्वारा गर्न सकिन्छ। ट्रेन द्वारा यसले टर्मिनल १ बाट २ 16 मिनेट लिन सक्दछ।
अब तपाईले बुडापेस्टमा हेर्नु पर्ने कुरा हेरे पछि तपाईले योजना गर्नु पर्छ कुन दिन बुडापेस्ट बाट यात्रा गर्नुपर्दछ। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, तर यी मेरा प्रस्तावहरू हुन्।
बुडापेस्टबाट दिन यात्रा
स्जेन्तेरे यो एक मात्र सबैभन्दा लोकप्रिय नजिकका गन्तव्यहरू हो किनकि यो मात्र हो राजधानीको २० किलोमिटर उत्तर र लगभग minutes० मिनेटमा ट्रेन द्वारा पुग्न सकिन्छ। तपाईं बस लिन सक्नुहुन्छ वा नदी तल जान सक्नुहुन्छ जुन सस्तो छैन, तर यो पक्कै पनि सुन्दर छ।
यदि तपाईं राम्रो मौसमको दिनमा जानुहुन्छ भने हिंड्नु राम्रो हुन्छ, यसमा खाई पिउनुहोस् यति धेरै रेस्टुराँ र फूड स्टालहरू वा हंगेरी स्मृति चिन्ह किन्नुहोस्। यो एक आकर्षक शहर हो, को कब्ल्ड सडकहरू, रूखहरू र पुरानो भवनहरू, जस्तै १g औं शताब्दीको बीचको ब्लागोभसेन्स्का चर्च।
आराम गर्नुहोस् डान्यूबको किनारमा त्यसैले तटमा समय खर्च गर्नु पनि सल्लाह हो। पैदल यात्री दुमत्सा जेनोसँग हिंड्नुहोस् वा यसको संग्रहालयहरू, सेन्ट्रल प्लाजा वरिपरि टहल पोष्ट पार्क र समुद्री तटमा आराम गर्नु उत्तम छ। अलविदा भन्न, तपाईं चढ्न सक्नुहुन्छ आक्रोशित लुकआउट। यदि तपाइँको विचार पूरा दिन खर्च गर्नु हो भने तपाइँ बाइक भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ।
Visegrád यो बुडापेस्ट नजिकैको सहर हो जुन पनि धेरै सुन्दर छ। योसँग यसको भण्डार छ, यसको महल छ, र यसको भित्ताहरूको माथिबाट डान्यूब पार गरिएको परिदृश्यको दृश्य राम्रो छ। भ्रमणको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण अंश भ्रमण गर्नु हो १th औं शताब्दीको महल जो पहाडको शीर्षमा छ। यहाँबाट माथि राम्रो विचार, जहाँ तपाईं दुई र तीन घण्टा बीच चढाई छ। यो लायक!
के तपाई धेरै हिंड्न चाहानु हुन्न? ठिक छ भने त्यहाँ एउटा बस छ जुन तपाईंले फेरी स्टेशनमा समात्न सक्नुहुन्छ। महल बाहेक त्यहाँ केही क्याफेहरू, पुनर्जागरण दरबार र एक संग्रहालयको भग्नावशेषहरू छन्. तपाईं Visegrád मा कसरी पुग्नुहुन्छ? El बुडापेस्ट बाट रेल यसले एक घण्टा लिन्छ, र त्यसपछि तपाईंले नदी पार गर्न क्यासल पहाडमा डुry्गा लिनुपर्नेछ। पनि त्यहाँ एउटा बस छ Jjpest-Városkapu बाट जो एक घण्टा र आधा लिन्छ। उच्च मौसममा तपाईं तल डेन्यूब जान सक्नुहुन्छ, हाइड्रोफोइल द्वारा, एक घण्टामा।
हंगेरीको सब भन्दा पुरानो शहर हो Esztergom, बुडापेस्टबाट केवल kilometers० किलोमिटर। ईतिहास र पुराना भवनहरूका प्रेमीहरूका लागि यो गन्तव्य हो जुन ज्ञात हुनुपर्दछ। किन? त्यहाँ स्तम्भहरू, टावरहरू र एक शानदार प्रवेश द्वारको साथ एक सुन्दर क्याथेड्रल छ १० औं शताब्दीको शाही महल र धेरै संग्रहालयहरू। यहाँ एक पटक तपाईं क्षेत्र वरिपरिको भ्रमणका लागि साइन अप गर्न वा कार भाडामा जान सक्नुहुन्छ पिलिस हिमालको भ्रमण गर्नुहोस्।
तपाईं यहाँ नुग्गी स्टेशनबाट रेलमा पुग्न सक्नुहुनेछ, करिब डेढ घण्टामा। तपाईं राजधानीको केन्द्रीय बस स्टेशनबाट पनि बस लिन सक्नुहुनेछ र एक घण्टा लाग्छ। र, अवश्य पनि, हाइड्रोफोइलद्वारा यसले तपाईंलाई भिगाडोटरबाट लिन्छ र यसले एक घण्टा आधा पनि लिन्छ।
यदि यो सहरको शैली हो जुन तपाईंलाई मनपर्दछ, अर्को सम्भावित गन्तव्य हो ईगर, Bükk माउन्टेनको दक्षिणी भागमा, बुडापेस्टको १ 140० किलोमिटर पूर्व। तिमिले देख्ने छौ बारोक चर्चहरू, थर्मल बाथहरू, बजारहरू र ल्याण्डस्केपहरू सुन्दर एगर बासिलिका १ th औं शताब्दीको पहिलो आधा देखि मिति र राम्रो विचार प्रस्तुत गर्दछ। यो केवल चर्च मात्र होइन, त्यहाँ १ bar बारोक चर्चहरू छन् जान्नु, यसका अतिरिक्त डोब क्यासल वा यसको meter 53 मिटर अग्लो टावरको साथ बारोक लाइसेम।
ऐतिहासिक पुरानो शहर ईगर एक पैदल यात्रा खजाना हो र उहाँको मोती, कुनै श doubt्का बिना, छ एगर क्यासल ११ औं शताब्दी देखि डेटि। र यसमा अनन्त कथाहरू छन्। र अन्तमा, यदि तपाईंसँग प्रशस्त समय छ वा तपाईंलाई धेरै मद्य मनपर्छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ बाहिरी दाखबारीहरूमा जानुहोस् जुन बाहिरी छेउमा छ सहरबाट, सुन्दर महिलाको उपत्यकामा। एगर बसको झण्डै दुई घण्टामा वा रेलमा केलेटी स्टेशनबाट एक घण्टामा पुग्न सकिन्छ।
अर्को सिफारिश गरिएको गन्तव्य हो Aggtelek राष्ट्रीय पार्क र बारादला गुफा। दुबै गन्तव्यहरू उत्कृष्ट छन् र व्यर्थमा छैनन् पार्क एक विश्व विरासत साइट हो। यो स्लोभाकियाको सिमानामा ठीक छ, बुडापेस्टबाट दुई र आधा घण्टा सम्म, र स्थानीय वनस्पति र जीव जन्तुहरूको प्रशंसा गर्न मार्गहरूको नेटवर्क छ। र निस्सन्देह, सब भन्दा राम्रो कुराdकिलोमिटरको मुख्य सुरु withसहित बाराडला गुफा हो जुन छिमेकी देशमा जान्छ। गुफा भ्रमण एक हो हुनु पर्छ।
Este यो एक सबै भन्दा टाढाको दिन यात्रा हो, त्यसैले यो हंगेरीको राजधानी चाँडै छोड्नु राम्रो हुन्छ। सबै भन्दा राम्रो छ भाडाको कारमा जानुहोस् किनकि सडक पनि सुन्दर छ, तर यदि तपाईं सक्नुहुन्न भने, सार्वजनिक यातायात छ: रेल र बस आइपुग्छ तर दुबै स्पष्ट रूपमा चार घण्टा भन्दा बढी लाग्छ।
अन्तमा, अन्तिम सिफारिश गरिएको गन्तव्य हो Hollóko। बुडापेस्टबाट बसमा दुई घण्टा लाग्छ र सेवा दैनिक Puskás Ferenc स्टेशन बाट छुट्छ। त्यहाँ सप्ताहको दिनमा एउटा बस छ र सप्ताहन्तमा दुई छ। तपाईं रेलमा जान सक्नुहुन्छ तर यो सुविधाजनक छैन किनकि यसले लामो समय लिन्छ।
Hollókó यो एक विशिष्ट हंगेरी गाउँ हो, विश्व सम्पदा, एक सुन्दर को भग्नावशेष संग महल पहाडमा १२ औं शताब्दी, धेरै सांस्कृतिक चाडपर्व र सडक सहित एक जोडी 67 विशिष्ट घरहरू ढु stone्गा र काठमा पुनर्निर्माण गरियो अन्वेषण को लागी आदर्श।
त्यहाँ धेरै सums्ग्रहालयहरू छन् पुतलीको स Muse्ग्रहालय वा वीभरहरूको संग्रहालयउदाहरणको लागि, र यदि तपाईं विशेष गरी इस्टरमा जानुहुन्छ भने, व्यक्तिहरू उनीहरूको विशिष्ट पोशाकमा लुगा लगाउँछन् र सबै कुरा धेरै रंगीन हुन्छ। राम्रो मौसम पनि भ्रमण गर्न राम्रो छ स्क्यानसेन खुला एयर संग्रहालय, केहि ह Hungarian्गेरियन परम्पराका बारे जान्नको लागि।
अहिलेसम्म केही बुडापेस्ट बाट गर्न सिफारिश दिन यात्रा। तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पश्चाताप छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » बुडापेस्ट » हंगेरी, बुडापेस्ट बाट दिन यात्रा